Hubaal Media | Hubaal Media Group
“Cuqaashii Ay Xirsi & M. Xaashi u Adeegsan Jireen Ciidagale Oo Xamar Ka Degey Ka Dib Markii Madaxtooyada Laga Soo Xidhay”- W/Q : Garaad Mahad M. Cabdi
“Cuqaashii Ay Xirsi & Maxamuud Xaashi u Adeegsan Jireen Ciidagale
Oo Xamar Ka Degey Ka Dib Markii Al-baabka Madaxtoyada Laga Soo Xidhay”- W/Q : Garaad Mahad Maxamed Cabdi..
Laba Caaqil oo a mid ah Cuqaashii Ciidagale ayaa Jilbaab Kaga Dhoofay Madaarka Cigaal International Airport, Iyagoo u Kicitimay Magaalo Madaxda Somalia Ee Moqdisho.
Labadan Caaqil oo kala ah Caaqil Mustafe Maxamed Askar (Girgire) iyo Caaqil Cabdirisaaq Maxamed Askar Waxay Hormood u ahaayeen Cuqaashii Xirsi & Ina Xaashi Ciidagale u Adeegsan Jirey..
Labadan caaqil oo ka mid ah cuqaashii reerka hor boodayay 7-dii sano ee xukuumaddii siiraanyo, waana nimankii guryaha ka dhistay masaakiintii taarka madaarka laga raray.
Waa niman ku caan baxay hadba halka qadhaabku ka galo, waana niman mabda’ooda shilimo ku ibsada. Kulmiye ayay ahaayeen laakin mabda’ kumay ahayn kaliya qabax qaadasho ayay ku ahaayeen.
Waayo mabda’oodii waxay kaga tageen kadin laga celiyay oo Maxamed kaahin-na ka diiday hawl ay ka rabeen fulinteeda, markaas ayay WADDANI isku shubeen.
Markay tan carabka mariyeen ayay maantana doonayaan inay Xamar-na carabka soo mariyaan, iyagoo Raysalwasaare ku xigeenka Somalia ugu tagay inuu u geeyo Farmaajo & jaaliyadaha Qatar si ay gacanta u soo mariyaan.
Hore-na umay dhicin MAG Xamar laga soo qaato waayo ninka ku dhinta wuxuu ahaa dameer bakhtiyay..
Markaan duluc-da hadalkayga u soo daadago xaqiiqada safarkani wuxuu daaranyahay xidhiidh ay ka heleen Dawladda Qatar arintaas oo macneheedu yahay mijo xaabinta jiritaanka Somaliland.
Sidaynu ognahay Somaliland waxay saaxiib dhaw la tahay dawladda Imaaradka, imaaraadka iyo qatar-na waxa u dhexeysa xurguf siyaasadeed iyagoo isku haya dano dhaqaale iyo dilaalis qaan-gaadhay.
Cuqaashani waxay hor dhac u yihiin cuqaal tiro badan oo ka daba tagi doonta, kuwaas oo la mabda’a ah watana fikirka dawladda qatar ee lagu mijo xaabinayo qaranimada Somaliland..
Ugu denbeyn waxaan u soo jeedinayaa Madaxweynaha, wasiirka arimaha gudaha iyo laamaha amaanka inay sharciga mariyaan haddii kale waxay noqon doontaa waddo inagu furantay..
Deni Oo Waxba Kama Jiraan Ku Tilmaamay Wareegtooyinkii Uu Soo Saaray Axmed Karaash
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay wareegtooyin uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka Puntland kaas uu ku magacaabay agaasimeyaal iyo guddoomiyaha gobolka Mudug.
Deni oo cuskanaya dastuurka ayaa yidhi sidatan “Anigoo ah Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni, dhawrayana masuuliyadda iga saaran illaalinta sareynta sharciga sida ku cad Dastuurka Dowladda Puntland qodobkiisa 80-aad, farqaddiisa 2-aad, fulinayana awoodaha Dastuuriga ah ee ku cad qodobka 80-aad, waxaan halkaan ku caddeynayaa in aanaysan dhaqangal ahayn wareegto kasta ee uu soo saaro Madaxweyne kuxigeenka Dowladda Puntland aniga oo ku sugan gudaha Dalka Soomaaliya”
Wuxuu ugu baaqay hay’adaha dowladda ay khuseyso arrintani in aanay u hoggaansamin wareegtooyinka uu soo saaray Axmed Cilmi Cusmaan (Karaash)
“Waxaan farayaa dhammaan hay’adaha Dowladda in qofkastaa shaqadiisa qabsado, aanna loo hogaansamin wareegto kasta oo aan waafaqsaneyn Dastuurka iyo Qawaaniinta kale ee Dowladda Puntland sida ku cad qodobka 138-aad, farqaddiisa 2-aad ee Dastuurka Puntland” ayuu yidhi Deni oo qoraal soo dhigay boggiisa Facebook.
Dagaalka Ukraine: Putin Oo Hanjabaad Hor Leh Ka Soo Saaray Adeegsiga Hubka Nukliyeerka
Madaxweyne Vladimir Putin ayaa mar kale u baaqay awoodda nukliyeerka ee Ruushka iyadoo ay sii socoto colaadda Ukraine, waxa uu sheegay in nidaamka cusub ee gantaallada ballistic-ga ee Ruushka ay tahay in cadawga Moscow ay dib u fikiraan.
Isagoo ku dhawaaqay duulaanka Ruushka ee Ukraine sideed Isbuuc ka hor, Putin wuxuu uga digay reer galbeedka in isku day kasta oo looga hortagayo “ay horseedi doonto natiijo aan la mahadin oo aan horay loo arag taariikhda adduunka”. Dhowr maalmood ka dib, wuxuu amar ku bixiyay in ciidamada Nukliyeerka ee Ruushka heegan la geliyo.
Bartamihii bishan April Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa Jimcihii sheegay in caalamka uu u toog hayo suuragalnimada ah in Ruushka uu duqeyn nukliyeer ah u adeegsan doono dalkiisa.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa bishii hore sheegay in “xiisadda Nukliyeerka, oo markii hore ahayd mid aan la qiyaasi karin, ay hadda dib u soo laabatay ay aad u sareyso suurtagalnimada ah in la adeegsado.”
Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa mar sii horreysay sheegtay in Moscow ay sameysanayso laba diyaaradood oo loogu magac daray “Maalinta Qiyaamaha”, kuwaasi oo loogu tala galay in lagu qaado madaxda ugu sarreyso dalka iyo hoggaamiyeyaasha milatariga haddii dalkaasi hubka niyuukleerka lagu soo weeraro.
Wakaaladda wararka ee dalkaas Ruushka ee RIA oo soo xiganaysa ila-wareedyo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ciidamada cirka iyo kuwa hawada sare ee dalkaas ay laba saldhig oo talis ah ku yeelan doonaan gudaha diyaaradda nooca Il-96-400M.
Diyaaradda Il-96-400M ayaa ah diyaaradda nooca Il-96 oo diyaarad weyn oo duulimaadyada rayidka loo isticmaalo oo la casriyeeyay. Noocyo badan oo ka mid ah diyaaraddaasi Il-96 ayaa haatan ah diyaaradda inta badan uu ku safro nadaxweyne Vladimir Putin, si la mid ah diyaaradda Air Force One ee dalka Mareykanka.
Labadan diyaaradood ayaa waxaa lagu farsameyn doonaa magaalada Voronezh, halkaasi oo ay ku taallo warshadda Voronezh Aircraft Production, taasi oo sameysa diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatarigaba.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in diyaarad saddexaad oo noocaasi ah la sameyn doono mustaqbalka, waxaana diyaaradahani cusub ay beddali doonaan diyaaradda nooca Il-80 oo hadda gabowday.
Bayaankii sannadkii 2020 ee cinwaankiisu ahaa “Mabaadi’da aasaasiga ah ee Xiriirka Ruushka ee ka hortagga Nukliyeerka” ayaa dhigaya in madaxweynaha Ruushka uu go’aansanayo isticmaalka hubka nukliyeerka.
Shandad yar, oo loo yaqaan Cheget, ayaa mar kasta lagu hayaa meel u dhow madaxweynaha, taasoo ku xiriirta shabakadda taliska iyo xakamaynta ciidamada istaraatiijiyadeed ee Ruushka.
Haddii Putin uu soo saaro go’aanka adeegsiga Nukliyeer ah, maxaa dhici doona?
Milatariga Ruushka wuxuu heli karaa amarka Putin ee isticmaalka hubka Nukliyeerka ah waxayna heystaan laba hub oo Nukliyeer ah. Madaxweyne Putin waxau diri kartaa koodka ama numbarka oggolaanshaha taliyeyaasha hubka ee gaarka ah, kuwaas oo markaa fuliya hababka bilaabista.
Waxa kale oo jira nidaamka kaydinta nuqulka, oo loo yaqaan Perimetr, kaas oo u oggolaanaya askarta in ay ridaan gantaalaha tooska ah, iyaga oo ka gudbaya dhammaan jaraanjarada taliska.
Hargeysa: Salaadda Roob-doonta Iyo Dhibica Raxmadda Alle Oo Isku Beegmay
Hargeysa iyo Nawaaxigeeda Oo uu ka da’ay Roob lagu qabowsaday
Hargeysa (Hubaal) Raxmaadkii ILLAAHEY ayaa maanta abaaro 12:00 duhurnimo ka curtay magaalada Hargeysa. Roobkani oo muddo kooban da’ayay ayaa bulshaweynta magaalada Hargeysi ay aad ugu diirsaddeen. Maalmihii u danbeeyay waxaa jiray kuleyl, iyo biyo yaraan ka jiray qaar ka mida xaafaddaha magaalada Hargeysa.
Waana maalintii koowaad ee Roobka Gu’gu uu ka da’ay magaalada Hargeysa iyo xawaaxigeeda.
Saaka ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa kala qaybgalay tukashada salaad roob-doon ah oo shalay dalka oo dhan laga iclaamiyey, maantana la oogay.
Somaliland oo soo Saaraysa Xeerkii Isticmaalka Qalabka ka Hor-taga Dabka
Hargeysa (Hubaal) Wasiirka Wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahirn Axmed ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ay soo saarayaan xeer ganacsatada dalka ku khasbaya in ay isticmaalaan qalabka dab-demiska ee la dhigo meheradaha.
Wasiir Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay in xeerkaasi jidaynayo ama khasab kaga dhigayo ganacsatada kala duwan ee dalka in ay meheradahooda dhigaan qalabka loo isticmaalo dam-demiska, kaas oo gaadhsiisan in ciddii u hogagaansami wayda lagala noqonayo liisanka ganaciga.
Wasiirka Wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahirn Axmed, waxa uu sidasasi ka sheegay hadal uu ka jeediyay Munaasibad ay Shirkadda Somaliland Fire ku soo bandhigtay qalab casriya oo Dhinaca Dabka ah. Waxaanu yidhi “”Waxaanu soo saarayna xeerka isticmaalka qalabka damdamiska ee Suuqyada Dalka. Runtii shirkadani waxa ay keentay qalab aad u wanaagsan oo ah qalab loogu talo galay ka hortagga dabka.”
Wasiirku waxa uu intaasi raaciyay “Wax kasta oo ina soo maraa waxay sameeyaan waayo aragnimo, xarumaheena ganacsi ee labada jeer gubtay waxya ahayd Tog-wajaale, waa tii la hagaajiyay dariiqyadii ee dab-damiska loo sameeyay, waxaa tababaray jananka iyo ciidankiisa, wax badan ayay ka tartay badbaadada baniaadamka iyo hantidas meesha taalla.”
Habeenkii dhawayd waynu ogayn ee suuqa Waaheen. Qadar ALLE ayaa dhacay laakiin laba arrimood ayaa u sabab ahaa, qaabka ay ganacsatadeena suuqa Waaheen u dageen oo gabi ahaanba diidan kana soo hor jeeda in wax badbaado ah la samayn karo, dariiqyadii ayaa la degay, dhammaanteen inaga oo goob joog ka ah waxaynu wada arkaynay hantideeni oo gubanaysa oo aynaan waxba ka qaban karaynin,” ayuu yidhi Wasiirka Wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahirn Axmed, waxaanu intaasi raaciyay “Ganacsade dhan oo bakhaar leh ooh anti badani taallo ayaa haddana waxa uu ka lexo-jeclaabayaa in uu bakhaarkiisa dhigto haan yar oo 30 dollar ah. Markaa waxaa khasab ah in aynu shuruucdeena ku darno in dhammaan goobaha ganacsiga dalka ay wada yaallaan qabalka dam-damiska. Hadda wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashanaysa ciidanka booliska iyo ciidanka dab-damiska waxaanu soo saaraynaa ixeerkii lagu isticmaalayay qalabka dab-daminta in ay meherad kasta ay taallo, in meherada ay ooliwaydaa tallaabada laga qaadayaa aanay noqonin ganaax yare ee la gaadhsiin doono heer la gaadhsiiyo in laga qaado liisanka uu ku ganacsanayo.
Xaaladda Abaarta Somaliland Oo Laga Deyriyey Iyo Dawladda Oo Shaacisay In Berri Oo Isniin Ah Guud Ahaan Gobollada Dalka Laga Oogi Doono Salaad Roob-Doona
“Waxa Jirta Abaar Baahsan Oo Dal Iyo Dadba Saamaysay, Taas Oo Sii Adkaatay Marka Maanta Loo Eego” Madaxweyne Ku-Xigeenka JSL, Ahna Guddoomiyaha Guddida Gurmadka Abaaraha
Hargeysa (Hubaal) Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, ayaa maanta iclaamiyey in berri oo isniin ah guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Somaliland, laga oogi doono salaad roob-doon ah oo ALLE lagaga tuugayo in raxmaadkiisa ugu deeqo dadka iyo duunyada abaaraysan. Sidoo kale Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha, Cabdiraxmaan Saylici ayaa si qoto dheer uga xog-warramay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta, waxana uu shaaca ka qaaday inay korodhay baaxadda abaarta saamaysay dadka iyo duunyada ku dhaqan Somaliland.
Madaxweyne-ku-xigeenka oo ay wehelinayaan xubno kamid ah guddida gurmadka abaaraha oo saxaafadda kula hadlay gudaha qasriga madaxtooyada, ayaa xukuumaddu dedaallo badan gelisay sidii loogu gurman lahaa dadka abaarta ku tabaaloobay, islamarkaana iyo biyo raashin tiro badan qaybisay, balse ay hawshaasi ka baaxad badatay intii hore, loona baahan yahay isku tashi bulsho iyo midnimo gudo iyo dibadba ah oo lagu taakulaynayo dadka iyo duunyada abaartu saamaysay. Dhanka kale waxa uu sharraxay sababaha keenay abaarta baahsan ee dalka ka jirta iyo culayska ay ku hayso dadka iyo duunyada miyiga ku dhaqan, waxana uu yidhi, “Dalka waxa ka jirta abaar baahsan oo dal iyo dadba saamaysay, taas oo sii adkaatay marka maanta loo eego, iyada oo abaartaas saamaynteedu ka timi labadii xilli-roobaad ee ina dhaafay oo roobku aad u yaraa, maanta saacaddaa aynu joogno oo gu’gii aynu bil ku jirno roobkii aynaan haynin, meelaha uu ka da’ayna ay aad u yar tahay.”
Madaxweyne ku xigeenku waxa uu bulshada reer Somalilnad ugu baaqay inay caawiyaan dadka abaarta ku tabaaloobay, isaga oo hay’addaha caalamiga ahna ugu baaqay inay hoos u eegaan xaaladda abaareed ee kasii daraysa.
Wasiir Kaahin: “Dhibaatada Suuqa Waaheen Waxa Lagaga Bixi Karaa Midnimo”
Nuxurka kulan Wasiirka Daakhiliga Somaliland la yeeshay Golaha Degaanka Caasimadda Hargeysa
Hargeysa -(Hubaal) Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Maxamed Kaahin Axmed, ayaa kulan ballaadhan la yeeshay xarunta xildhibaannada Golaha Degaanka Caasimadda Hargeysa maanta.
Kulanka oo ka qabsoomay xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta wejiga labaad ee Suuqa Waaheen, iyada oo la bilaabayo nadiifinta suuqa iyo socodsiinta hawlaha kale ee baaxadda leh, taasoo ay ku jirto naqshadaynta Suuqa Waaheen, kaasoo loo xilsaaray Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryaynta Jamhuuriyadda Somaliland.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Warbaahinta ee Wasaaradda Daakhiliga, Wasiirka ayaa xubnaha Golaha Degaanka Caasimadda uga warramay in dhibaatada ka dhacday Suuqa Waaheen ay tahay masuuliyad-wadareed wada saaraan xukuumadda, Dawladda Hoose iyo shacabka Somaliland, waxa keli ah ee lagaga bixi karaana ay tahay midnimo iyo isku duubni, iyada oo aan la is eedaynayn, cid gaar ahna aanay qaadanayn masuuliyadda.
Wasiir Kaahin ayaa xildhibaannada u sheegay in ay hawshan si dhow uga wada shaqaynayaan Dawladda Hoose, Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryaynta iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Golaha Degaanka ee Caasimadda Hargeysa, waxa hoggaaminayey Maayor Cabdikariim Axmed Mooge oo ay wehelinayeen Maayor-ku-xigeenka iyo Xoghayaha Fulinta ee Dawladda Hoose.
Dhinaca kale, waxa kulankan Wasiirka kala qaybgalay Wasiir-ku-xigeenka Maamulka Gobollada iyo Dawladaha Hoose, Naasir Caydiid Maxamed, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Md Cabdirashiid Xirsi Cali, Agaasimaha Guud ee Amniga, Ibraahim Cali Ismaaciil, Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex, Maxamed Cilmi iyo Agaasime-waaxeedyada Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Kulamo lagu dardar gelinayo nadiifiinta iyo naqshadeynta Suuqa Waaheen ayaa sii socon doona, sida lagu xusay warka xafiiska Warbaahinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland.
HARGEYSA: Xisbiga WADDANI Oo Soo Bandhigay Korodhka Qiimaha Biyaha Wershadeysan
Hargeysa (Hubaal) Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani ayaa ka hadlay korodh uu sheegay in lagu sameeyay qiimaha biyaha wershadaysan ee loo yaqaan mooyasaxada.
Qoraal lasoo dhigay barta Facebook xisbigu ku leeyahay, ayaa xisbigu ku sheegay in qiimaha biyaha sifaysan ee la kordhiyay uu ka yimid kadib shir ay yeesheen wershadaha soo sara biyaha caagadaha ku xidhan.
qoraalkan ayaa lagu bilaabay sidan:
“Qiimaha biyaha la sifeeyo ayaa si is og u kordhay caawa kadib shir la sheegay in yeesheen warshadaha soo saara biyahu.
Korodhkan ayaa yimi xili litirka shidaalka ahi u marayo 9,600 SoLSH.
Caagadda 750 ml ah oo ahayd 2,500 SoLSH ayaa hadda laga dhigay 3,000 SoLSH taas oo ah korodh dhan 20%. Dhanka kale caagadda 1 liter ah ayaa iyadana lagu daray 1000 SoLSH taas oo korodhay 25%.
In ganacsatadu ku heshiiso inay dadka qiimaha ku kordhiso waa sharci-darro, kaalintii xukuumadeed oo maqan waxaanay ka hor imanaysaa mabda’a suuqa xorta ah.
Waxaa loo baahan yahay samaynta xeerarka iyo siyaasadda tartanka iyo ilaalinta Dadka (Competition and Consumer Protection Policy). Xisbiga Waddani waxaa ka go’an in la xaqiijiyo tartan xalaal ah, kobcinta iyo dhiirigelinta Ganacsatadda iyaddoo dadkana laga ilaalinayo in loo heshiiyo.
Wasiirkii Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska ayaan la hayn tan iyo intii dalka ay ka dhaceen masiibooyinka sicir-bararka iyo dabka leh. Waxaanu xukuumada ugu baaqaynaynaa in aanay indhaha ka qarsan culaysyadda soo waajahay ganacsatadeena iyo culayska lagu ciirayo dadka masaakiinta ah ee awalba la il darnaa korodhka ascaarta.
Waxa qorey: Xamse C. Khayre
Xog-hayaha Ganacsiga, Warshadaha & Dalxiiska
Xisbiga WADDANI- Rejadda Shacabka.
Hay’adda SOHASCO Oo Shahaadooyin Guddoonsiisay 470 Dhallinyaro Ah Oo Dhamaystay Xirfado Kala Duwan
Hargeysa (Hubaal) Hay’adda maxaliga ah ee SOHASCO, ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 470 dhallinyara oo dhammeystay xirfado kala duwan. Haddaba munaasibad hannaankeeda dhicitaan si weyn looga soo shaqeeyay, oo ka qabsoontay xarunta Hiraal Youth Center ee magaalada Hargeysa, ayaa hay’adda maxaliga ah ee SOHASCO oo kaashanaysa hay’adda UNFPA iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, waxa ay u soo gabo-gabeeyey 11 tabbabar xirfadeed kala gadisan 470 arday, kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Waxaana xafladii loo qabtay da’yartan waxbaratay ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay xukuumadda Somaliland, ku-xigeenka madaxa hay’adda UNFPA iyo masuuliyiin kale.
Dhammaan masuuliyiinta madasha ka hadlay ayaa waxa ay hambalyo u direen ardayda tababarka dhamaysatay, iyaga oo sidoo kale ka hadlay faa’iidooyinka ay bulshada u leedahay barashada xirafaduhu waxa aanay kula dar-daarmeen ardayda tababarka dhamaysatay in ay ded-daalka halkaasi ka sii wadaan.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska Somaliland, mudane Cabdixakiin Siciid Bustaale oo ugu horrayn halkaasi hadal ka jeediyay ayaa is dul taagay faa’idada ay leeyihiin barashada xirfaduhu.“Bulshadeena iyo dhallinyaradeenu waxa ay fahmeen in xirfaduhu ay qayb weyn ka yihiin horumarka nolosha bini’aadamka. Waxaanay xirfaduhu ka qayb qaataan, jihaynta, shaqo taga, la dagaalanka shaqo la’aanta, iyo horumarinta qofka bini’aadamka ahi dhaqaale ahaan horumaro, marka ardayey waxa loo baahan yahay in aqoontiinana aad sii wadataan xirfadiinana aad dhistaan. Waxaan hanbalyaynayaa hay’adda maxaliga ah ee SOHASCO oo ardayda maanta halkan ka qalin qoratay fursadan siiyay in ay waxbaraan.”
Agaasimaha ururka dhallinyarada Somaliland ee SONYO, Cabdixamiid Maxamed Cumar “Anigo magacii dhallinyarada Somaliland ku hadlaya waxaan halkan uga mahad celiya hay’adda UNFPA, waxaa kale oo hay’addaha dawladda ee kala duwan”
Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, mudane Cabdirashiid Caydiid Yaasin, ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in suuqa shaqada ay wax weyn ka baddelaan, isla markaana ay bulshada ka dhex muuqdaan.“Waxa ay u baahan tahay in aad la timaadaan isbaddel mushtamaca gudihiisa ah, oo aad saameyn ku yeelataan suuqa shaqada iyo bulshada dhexdeeda”
Waxa farxad noo ah in dhallinyaro tiradoodu intaasi le’eg tahay ay maanta dhammeystan qaybaha kala duwan ee xirfadaha isla markaana ay fursadan u siiyeen labada, hay’addood ee SOHASCO iyo UNFPA”Ayuu yidhi guddoomiye ku xigeenka gobolka Maroodijeex mudane Khadar Baaruud. Gaba-gabadii xafladda waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii tababarada dhamaysatay.
“Waxanu Soo Gabogabeynay Biyo Dhaamintii Uu Waday Sahamiye Foundation. Waxanu Qaybinay 2,000 Oo Booyadood Oo Ay Ku Baxday $316,724.”
Waxanu soo gabogabeynay biyo dhaamintii uu waday Sahamiye Foundation. Waxanu qaybinay 2,000 oo booyadood oo ay ku baxday $316,724.
Sahamiye Foundation oo la shaqeynaya guddiyada abaaraha ayaa toos u qaybiyey biyaha. Link-ga hoose ayaad ka heli karaysaa dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka aannu biyaha gaadhsiinay.
Sida shaxda ku cad meelaha booyadda biyaha qiimaheedu ahaa laba boqol oo doolar ama wax ka badan waxay kala yihiin Bali Mataan, Sabawanaag, Oodweyne iyo Caynabo. Tuulooyinka deegamadan hoos taga ayaa in badani aanay lahayn ceelal biyood oo u dhow.
Waxaynu u baahan nahay qorshe aynu kaga baxno gurmadka abaaraha ee sannad walba taagan. Sida dad badani sheegeen lacagtii ku baxday 15-kii kun ee booyadood ee dadkeennu ku deeqeen sannadkan waxay innoo qodi lahayd ceelal iyo dhaamam la gaadhsiiyo deegaamada biyo la’aantu ka jirto.
Shiinaha aya eedeyn u jeediyay wadanka Sweden kadib dhacdadii ugu dambeysay ee lagu gubay kitaabka Quraanka ee ka dhacaday Sweden.
“Xoriyada hadalku ma ahan marmarsiyo lagu kiciyo takoor dhaqan ama isir, kuwaas oo bulshada lagu kala qaybinayo” sidaas waxaa yiri Wang Wenbin oo ah afhayeen u hadlaya wasaarada arimaha dibada ee Shiinaha, oo ka hadlayay dhacdadaan oo ay si weyn u cambaareeyeen muslimiinta caalamaka.
“Waxaan rajeyneynaa in Sweden si dhab ah u ixtiraamto diimaha ay aaminsan yihiin kooxa laga tirada badan yahay ee muslinku ka mid yihiin” ayuu yiri Wang, sida aan ka soo xiganay warbaahinta Chinese daily Global Times.
Todobaadkii hore hogaamiyaha kooxda midigta fog Rasmus Paludan ayaa magaalada Linkoping ee Sweden ku gubay kitaab quraan ah. Sidoo kale wuxuu ku goodiyay in uu kitaabo kale gubi doono.
Turkiga, Sacuudig, iyo wadamado kale oo muslimin ah ayaa cambaareeyay gubitaanka kitaabka quraanka, iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay ficil kicin iyo ka xanaajin ah oo ka dhan ah muslimiinta.
Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa ka mid ah kuwa sida adag u cambaareeyay dhacdadaan.
Ururuka u dhaqdhaqaaqa Islaamka ayaa sheegay in gubista quraanka ay dadka muslim ka ah ku abuurtay walwal ku aadan Islam-nacayb ka sii badanaya oo ay gadaal ka riixayaan taageerayaasha midigta fog.
123...1,682Page 1 of 1,682
“Waxaan leeyahay Raggii Kaarahu Jiidhay, Nabada Ha Ilaalliyaan Oo Xeryaha...
Aqoonyahan Yuusuf Garas oo Dersay Saamaynta uu ka Tegey Dabkii Waaheen+Tallooyin...
Farriin Ka tidhi maxbuus 16 sanno ku xidhan madheera oo Lacag...